Baidoa Media Center » Dhismiha Golaha shacabka oo dib loo dhisayo
Dhismiha Golaha shacabka oo dib loo dhisayo
October 5, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Agaasimaha Baarlamanka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay halka ay marayaan howlaha lagu dhisayo guriga ummadda ama golaha Shacabka.
Maxamed C/llaahi Cabdi Ciyoow agaasimaha Baarlamanka oo la hadlay saxaafada Muqdisho ayaa sheegay in guriga ummadda la dhisay sanadkii 1968 xiligii uu Madaxweynaha ahaa Allaha u naxariistee C/rashiid Cali Sharma’arke.
Sidoo kale agaasimaha ayaa intaa ku daray in Injineerrada dhismaha ay ku taliyeen in dib loo dhiso xarunta golaha Shacabka maadaama dhismaha hadda ee burbursan uusan jirikarin muddo dheer, sidaas darteed ayuu yiri dib ayaa loo dhisayaa.
‘’guddoomiyaha Baarlamanka Prof. Jawaari ayaa dadaal ugu jira sidii mudanayaasha iyo shaqaalaha Baarlamankaba ay u heli lahaayeen meel wanaagsan oo ay ku qabsadaan howlahooda, waxaana jira waddamo kaladuwan oo sheegay in ay dhisayaan golaha Shacabka haddana wali guddoomiyaha ayaa laga sugayaa waddanka loo igmandoono dhismaha Baarlamanka’’ ayuu yiri Agaasimaha Baarlamanka.
Kulankii ugu dambeeeyay ee Baarlamanka ayaa Prof. Jawaari waxa uu mudanayaasha u sheegay in injineerradu ku taliyeen in la burburiyo dhismaha hadda lana billaabo dhismo cusub oo ka ballaaran kan iminka jira kaas oo dhismihiisu qaadan karo muddo hal sano ah maadaama uusan sii raagi Karin dhismaha golaha Baarlamanka.